Ihlangana njani i-Skype ngoku, eyona ndlela ifanelekileyo yokusondeza iifowuni zevidiyo | Iindaba zeGajethi
UIgnacio Sala | | Iiselfowuni, Iikhompyuter, software
Ukusukela oko kwaqala amashumi amane eminyaka, ukusetyenziswa kwe Iifowuni zokufowuna ii -apps andile kwaye ndikhulile eyona nto ikufutshane kunxibelelwano lomzimba ukuba singagcina uthotho lwethu oluthandekayo okanye abahlobo, kunye nabantu esisebenza nabo, kubo bonke abo kwenzekileyo kubo sebenza ekhaya.
WhatsApp, Facebook MessengerIi-Hangouts, i-Skype, i-Zoom, i-Houseparty ... zezinye zezona zicelo zisetyenziswayo. Phakathi kwazo zonke ezi zicelo, ezona zisetyenzisiweyo kwezi ze-forties ibe yi-Zoom, eye yahamba yanabasebenzisi abazizigidi ezili-15 ukuya kwizigidi ezingama-200, ukukhula utyhile zonke iziphene zeli qonga.
1 Kutheni i-Zoom ithandwa kangaka?
2 Kutheni ukusondeza kungaselulo ukhetho olusebenzayo?
3 Yintoni i-Skype Dibana ngoku?
4 Uyenza njani umnxeba wevidiyo usebenzisa iSkype Dibana ngoku
4.1 Ukusuka kwi-smartphone / tablet
5 Izidingo zokufikelela kwifowuni yevidiyo usebenzisa i-Meet Now
5.1 Ukusuka kwi-smartphone okanye ithebhulethi
6 Iintlanganiso Ngoku vs Ingxoxo yeQela leSkype
Kutheni i-Zoom ithandwa kangaka?
Zoom iye yaba sesona sicelo sisetyenziswa ngokubanzi ekwenzeni iminxeba yevidiyo ngenxa yayo ukusebenziseka lula, kuba kufuneka ucofe kwikhonkco ukufikelela kwifowuni yevidiyo nakwinto enegalelo lokuba ukuya kuthi ga kubantu abangama-40 banokuthatha inxaxheba kwifowuni enye yasimahla.
U-Eric Yuan, umseki we Zoom, wathi uyile le nkonzo intsha zinika indlela elula yokwenza iifowuni zevidiyo, ngekhonkco elilula, ingxaki ekhuthaze ukusombulula, apho abantu besithathu abanekhonkco kwividiyo, bajoyine kwaye baqale ukubonisa imifanekiso yencasa embi, bethuka abathathi-nxaxheba ...
Kutheni ukusondeza kungaselulo ukhetho olusebenzayo?
Kwezi veki zidlulileyo, Zoom ibonakalisile ukuba, ukongeza ekubeni yinkonzo yokufowuna yevidiyo kwiinkampani kwaye ngoku nakubantu ngabanye, ibiyinto eyiyo ingxaki enkulu kubucala babasebenzisi bayo ngenxa yeziphene ezininzi zokhuseleko eziye zafunyanwa kokubini kwizicelo zeefowuni eziphathwayo kunye neenkqubo zokhuseleko ezisetyenziselwa ukubethela unxibelelwano.
Ingxaki yezokhuseleko enyanzele iinkampani ezininzi kunye namaziko emfundo ukuba ayeke ukusebenzisa le nkonzo ukongeza kurhulumente waseMelika, ifunyenwe kwiminxeba yevidiyo, Iifowuni zevidiyo ezifihla phakathi komthumeli nomamkeli kodwa hayi kwiiseva yenkampani, ukuze nawuphi na umqeshwa akwazi ukufikelela kuzo zonke iifowuni zevidiyo.
Ingxaki ayipheleli apho, kuba ngenxa yokungabikho kokhuseleko kwiifowuni zevidiyo, ngokwe-Washington Post, kwi-intanethi singakwazi eFumana amawaka e Zoom ezirekhodiweyo kwi-Intanethi ngokukhangela okulula, kuba ezi zirekhodwe ngegama elifanayo (ngokungaqondakaliyo azityhilanga ukuba zenziwa njani), iifowuni zevidiyo ezinokuthi zikhutshelwe nabani na ukuba azibuke.
Kule ngxaki kufuneka songeze le iboniswe sisicelo se-iOS, esithi idatha eqokelelweyo yomsebenzisi kunye nesixhobo ngokusebenzisa i-Facebook Graph API, nokuba asisebenzisi iakhawunti yethu ye-Facebook ukungena. Le ngxaki isonjululwe kwiintsuku ezimbalwa emva kwenqaku elipapashwe yi-Motherboard ngesibhengezo soku kusilela.
Kwiintsuku kamva, omnye umhlalutyi wezokhuseleko wafumanisa indlela isifaki seMac kunye neWindows ezisebenzisa ngayo izikripthi ngaphandle kokucela imvume kumsebenzisi. ukufumana amalungelo enkqubo yesicelo.
Ukuba zonke ezi ngxaki zokhuseleko azanelanga ukuba ucinge ngokuyeka ukusondeza, awudingi ukuqhubeka ufunda. Kodwa ukuba ubeka ukubaluleka kwimfihlo yakho, Ukusuka kwaMicrosoft bazise uMdibaniso ngoku, inkonzo esebenza ngokufana ne-Zoom, kodwa ngokhuseleko esinokulindela ngalo kuMicrosoft, ongasemva kwale nkonzo.
Yintoni i-Skype Dibana ngoku?
I-Skype Dibana ngoku, Yenza into efanayo ne-Zoom, Kodwa ngokungafaniyo noku, ukhuseleko kunye nemfihlo yomsebenzisi ingaphezulu kokukhuselwa, kuba sisicwili esikhulu seMicrososft esisemva kwale nkonzo igqala ukubiza inkonzo yevidiyo. Ukufikelela kumnxeba wevidiyo yeqela, kufuneka isicelo sifakelwe (akuyomfuneko kwiikhompyuter) kwaye ucofe kwikhonkco.
Ngokungafaniyo nokusondeza, okusinyanzela ukuba sibhalisele inkonzo xa sifaka usetyenziso kwisixhobo sethu, ukuze sisebenzise ukudibana ngoku, akukho sidingo sokuvula iakhawunti ye-Skype (Nangona iakhawunti esiyisebenzisayo Windows 10 ilungile kuthi), kuba singasebenzisa usetyenziso lwendlela yeendwendwe.
Xa sicofa kwikhonkco ukujoyina incoko, iya kusicela ukuba singene igama lethu, ukuze ivele ecaleni komfanekiso wethu kwaye abantu basibize ngegama lethu.
Uyenza njani umnxeba wevidiyo usebenzisa iSkype Dibana ngoku
Ukusuka kwi-smartphone / tablet
Njengokusondeza, ukwenza inkomfa yevidiyo kunyanzelekile, ewe okanye ewe, ukusebenzisa usetyenziso olusemthethweni olufumanekayo kuzo zombini i-iOS kunye ne-Android, ukuze yenza igumbi lokuhlangana. Ngumbuki zindwendwe kuphela oza kuyisebenzisa, kuba abanye abasebenzisi kufuneka bacofe kwikhonkco ukufikelela kuyo.
Amanyathelo ekufuneka uwalandele yenza umnxeba wevidiyo usebenzisa iSkype Dibana ngoku:
Sivula usetyenziso, singena kulo ngeakhawunti yeMicrosoft (le siyisebenzisayo kunye nekhompyuter yethu yokuqala yeWindows isebenza ngokufanelekileyo).
Emva koko, sicinezela iqhosha lasentla lasekunene lesicelo esimelwe ngepensile encinci.
Emva koko, sicinezela Reunion.
Xa umfanekiso wekhamera (ngaphambili okanye ngasemva ukuba yi-smartphone okanye itafile) esiza kuyisebenzisa iboniswa, cofa apha Yabelana ngesimemo, kwaye sithumela ikhonkco kubo bonke abantu abazakuthatha inxaxheba kule fowuni yevidiyo.
Abantu abafumana ikhonkco, kufuneka kuphela ukuba bafake isicelo ngaphambili ukuba yi-smartphone okanye ithebhulethi. Ngokucofa kwikhonkco, i-Skype iya kuvula kwaye iya kusibuza ukuba sifuna ukusebenzisa njengeNdwendwe yesicelo. Cofa kwiNdwendwe, sibhala amagama ethu kwaye sijoyine intlanganiso / umnxeba.
Ukuba sisebenzisa ikhompyuter, inkqubo ilula ngakumbi, kuba kufuneka singene kwifayile ye- Iwebhu yeSkype ukwenza iintlanganiso ngoku, ngokusebenzisa le khonkco, kwaye ke ngokwenza ikhonkco kwigumbi lokuhlangana ekufuneka sabelane ngalo nabo bonke abafuna okanye abafuna ukufikelela kulo, akufuneki ukuba sikhuphele usetyenziso olukhoyo, nokuba yiWindows. okanye i-macOS, nangona sinokuyenza ukuba siqhelene nesicelo.
Ukuze ukwazi ukusebenzisa isikhangeli sethu kwiinkomfa zevidiyo ngeSkype, oku kufuneka kube yiChannel, Microsoft Edge o nasiphi na esinye isikhangeli esisekwe kwiChromium (Isibindi, i-Opera, iVivaldi…).
Izidingo zokufikelela kwifowuni yevidiyo usebenzisa i-Meet Now
Ukusuka kwi-smartphone okanye ithebhulethi
Ukuze usebenzise le nkonzo intsha yokufowuna, ewe okanye ewe, sinayo ufake usetyenziso lweSkype kwisixhobo sethuEwe asidingi ukufikelela kwisicelo ukubhalisa okanye ukungena kwiakhawunti yethu, ukuba sineakhawunti yeMicrosoft (@outlook, @hotmail, @ msn ...)
I-Skype: Iifowuni zasimahla ze-IM kunye nevidiyo
Imfuno ekuphela kwayo yokukwazi ukufikelela kwiminxeba yeqela esinikwa yiSkype ngokudibana ngoku, iyafana naxa uzenza, ukuba isikhangeli sethu yiGoogle Chrome, Microsoft Edge okanye nasiphi na esinye isikhangeli esisekwe kwiChromium. Ukuba asinazo kwezi bhrawuza, ngokunqakraza kwikhonkco, sinakho ukukhuphela i-Skype kwaye siyifake kwikhompyuter yethu ukuba asifuni ukufaka nasiphi na kwezi zikhangeli.
Kufuneka ikhunjulwe ukuba ngaba Windows 10 abasebenzisi kwaye unenguqulo entsha yale nkqubo yokusebenza, iMicrosoft Edge esekwe kwiChromium, Ifakwe ngokwendalo kwikhompyuter yakho.
Iintlanganiso Ngoku vs Ingxoxo yeQela leSkype
Iingxoxo zeqela le-Skype, Zizo iifowuni zevidiyo ebesoloko sizazi ukusuka kwi-Skype, zenzelwe wena kwasekuqaleni, igama leqela liyachazwa kwaye abathathi-nxaxheba bakhethwa kwasekuqaleni xa kudalwa incoko.
Dibana kwiqela leencoko, banokuseta ngokukhawuleza kwaye babelane nabanye ngamanyathelo amabini alula. Isihloko somhlangano sinokuguqulwa emva kokudala iqela kunye nokongeza umfanekiso weprofayili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » Ihlangana njani i-Skype ngoku, eyona ndlela ifanelekileyo yokuSondeza iifowuni zevidiyo